न्युयोर्कको राजनीतिमा उदाउँदै युवतीहरु - Durbin Nepal News
न्युयोर्कको राजनीतिमा उदाउँदै युवतीहरु पुराना राजनीतिज्ञहरु पछारिंदै
दूरबिन नेपाल ११ असार २०७७, बिहीबार ०३:१६
न्युयोर्कमा जुन २३ मा सम्पन्न ७३ औं एसेम्ब्ली अर्थात डिष्ट्रिक इलेक्सन(जिल्ला निर्वाचन) को डेमोक्रयाटीक प्राइमरीमा दुई युवतीहरुले जितेपछि न्युयोर्कको राजनीतिले केही कोल्टे फेर्न थालेको विष्लेशण गर्न थालिएको छ । क्वीन्स अन्तर्गतको एसेम्ब्ली डिष्ट्रिक ३४ मा धेरैले सोचे भन्दा फरक नतिजा आएको छ । विशेषगरी नेपाली अमेरिकन माझपनि कम चिनिएकी जेसिका गोञ्जालेज रहासले न्युयोर्कका भेट्रान स्थानीय राजनीतिज्ञ माइकल डेनेकरलाई पराजित गरेकी छिन । जेसिकाले भेट्रान डेनडेकर लाई भण्डै दुई गुण बढि मतले पराजित गरिन । जेसीका जी. रहास ले ४१ दशमलव ३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेकी थिइन । जेसिका न्युयोर्कको प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सीटी युनिभर्सीटी अफ न्युयोर्कमा प्राध्यापन गर्छिन । न्युयोर्कको एसेम्ब्ली डिष्ट्रिक ३४ अन्तर्गत ज्याक्सन हाइट्स, इष्ट एलम्हस्र्ट र वुडसाइट र कोरोनाका केही भाग पर्छन, जहां नेपालीहरुको बसोबासपनि अत्यधिक रहेको छ ।
को हुन त जेसिकासंग पराजित माइकल डेनडेकर ?
माइकल यस्ता राजनीतिज्ञ हुन जो सन २००८ देखि लगातार छैठौ पटक सम्म न्युयोर्क स्टेट एसेम्ब्लीमा निर्वाचित हुंदै आएका थिए । सन २०१२ मा त उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए । सो बेला उनी विरुद्ध आफनै पार्टीं डेमोक्रेटीकले मात्र होइन प्रतिष्पर्धी दल रिपव्लीकनलेपनि उमेदवार पाएको थिएन । सो बेला उनी प्राइमरी र आम निर्वाचन दुवैमा निर्विरोध निर्वाचित बनेका थिए । तर सन २०१८ मा ९९ दशमलव २ प्र्रतिशतका साथ छैठौ पटक एसेम्ब्ली मेम्बर जितेका माइकल, २०२० को प्राइमरीमा भने २२ दशमलव ६ प्रतिशत मत ल्याउदै पराजित हुन पुगे ।
डिष्ट्रिक ३८ मा भारतीय मुलकी युवतीको चमत्कार
त्यसैगरि क्वीन्स अन्तर्गतको एसेम्ब्ली डिष्ट्रिक ३८ मा पनि नसोचेको नतिजा आएको छ । भेट्रान राजनीतिज्ञ माइकल जी मिलरलाइ पनि एक युवतीले आन्तरिक निर्वाचनमा पछारेकी छिन । सन २००९ मा गभर्नर प्याटरर्सनले आव्हान गरेको विशेष निर्वाचनमा निर्वाचित भएपछि एसेम्ब्ली डिष्ट्रिक ३८ मा उनको प्रवेश भएको थियो । त्यसपछि लगातार निर्वाचित हुंदै आएका मिलर २०१२ को प्राइमरीमा प्रतिष्पर्धामा निर्वाचित भएपनि आम निर्वाचनमा भने निर्विरोध चुनिएका थिए । सो बेला रिपव्ल्किनले उनी विरुद्ध उमेदवार उठाउने हिम्मत गरेन । सन २०१८ को निर्वाचनमा पनि ९९ दशमलव ६ प्रतिशत मत प्राप्त गर्दै जितेका थिए । तर अहिले भने पासा पल्टिएको छ । मिलर जस्ता भेट्रानले एक भारतीय मुलकी युवती जेनिफर राजकुमारसंग पराजित हुनु परेको छ । जेनिफर राजकुमारले ५२ दशमलव ५ प्रतिशत मत ल्याउंदा मिलरले दुई गुणाभन्दा कम मत अर्थात २५ दशमलव २ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन । एसेम्ब्ली डिष्ट्रिक ३८ अन्तर्गत उड हेभन, रिचमण्ड हिल, ओजोन पार्क र ग्लेडल क्षेत्र पर्दछन । जेनिफर राजकुमार दोस्रो पुस्ताकी भारतीय मुलकी हुन ।
यी परिणामले न्युयोर्कको राजनीतिमा केही परिवर्तन आउने संकेत गरेको छ । विशेषगरी डेमोक्रयाटीकहरुको बाहुल्यता रहेको न्युयोर्कमा अब युवा उमेदवारलाई रुचाइन थालेको टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।
११ असार २०७७, बिहीबार ०३:१६ मा प्रकाशित